Nei ini ndichiri kukwanisa kuvhura yakatarwa DBF faira? - DataNumen
Pane mikana mitatu yemamiriro aya, seinotevera:
Your DBF faira rakagadzirwa nechimwe chishandiso, asi iwe unoda kuvhura iyo yakamisikidzwa faira mune imwe application, iyo isinga nyatso kuenderana neyekutanga uye inokonzeresa matambudziko. Mhinduro ndeyekuseta vhezheni chaiyo mubhokisi re combo padivi pe "Sarudza DBF kugadziridzwa ”edit bhokisi maererano nechishandiswa chechipiri uyezve start kugadzirisa faira zvakare. Semuenzaniso, yako DBF faira rakagadzirwa naClipper asi iwe uchida kurivhura mu dBase III, ipapo unofanirwa kuseta "Shanduro" kuenda ku "dBase III" wobva wagadzirisa iyo faira zvakare.
Yako yakagadziriswa DBF faira rakakura kupfuura 2GB, iyo inozivikanwa saizi muganho weiyo DBF mafaera, saka most DBF zvinowirirana zvinoshandiswa hazvigone kuvhura yako faira. Semuenzaniso, kana uchishandisa Visual FoxPro kuvhura iyo faira, iwe unowana "Kwete tafura" kukanganisa. Mhinduro ndeyekugonesa "Split faira kana iri rakakura kupfuura ### MB" sarudzo mu "Sarudzo" tebhu uye woisa kukosha kwakakodzera, iyo inofanira kunge iri pasi pe2GB, semuenzaniso, 1800MB, sehukuru hwefaira saizi, uye wobva wagadzirisa yako yekutanga DBF faira zvakare. Kana goho rakagadziriswa faira rakakura kupfuura uyu muganho, DDBFR ichagadzira iyo nyowani faira yekumisikidza iyo yasara yakadzorerwa data. Uye kana iyo faira rakakamurwa rasvika pamuganhu zvakare, yechipiri nyowani yekuparadzanisa faira ichagadzirwa, zvichingodaro.
Mune yako yakagadziriswa DBF faira, pane anopfuura makumi maviri nemashanu minda iri patafura. Parizvino most DBF zvinowirirana zvinoshandiswa hazvitsigire tafura ine anopfuura makumi maviri nemashanu minda. Semuenzaniso, kana uchishandisa Visual FoxPro kuvhura iyo faira, iwe unowana "Kwete tafura" kukanganisa. Mhinduro ndeyekugonesa "Split tafura kana paine anopfuura # # # minda" sarudzo mu "Sarudzo" tab uye kumisikidza yakakosha kukosha, semuenzaniso, 255, seyakanyanya munda kuverenga, uye wozogadzirisa yako yekutanga DBF faira zvakare. Saka apo DDBFR inoona kuti pane anopfuura makumi maviri nemashanu minda iri patafura, ichagadzira tafura nyowani yekumhara minda yasara. Uye kana iyo minda yasara ichiri kudarika makumi maviri neshanu minda, yechipiri tafura yekuparadzanisa ichagadzirwa, zvichingodaro.
haigone kuvhura, yakatarwa faira
Yakarongwa musi waMay 17, 2021